Chi Ga-Ebi Archives - Okwu Dị Ugbu A
CHINEKE GA EBU
Jụọ, Chọọ, ma Kụọ aka
Ihe na March 10, 2022 March 14, 2022 by Mark
Rịọ, a ga-enye gị;
chọnu, unu gāchọta kwa;
kụọ aka na a ga-emeghere gị ụzọ…
Ọ bụrụ na unu bụ ndị ajọ omume,
mara ka esi enye umu-gi ezi onyinye;
ole ka Nna-unu nke elu-igwe gādi kari
Nyenụ ndị na-arịọ ya ihe ọma.
N’oge gara aga, M ga-elekwasị anya n'ezie n'ịnara ndụmọdụ nke m. M dere ụfọdụ oge gara aga na, ka anyị na-abịaru nso na anya n'ime oké ifufe a, otú ahụ ka ọ kwesịrị ka anyị lekwasịkwuo anya na Jizọs. N'ihi na ifufe nke a diabolical oké ifufe bụ ifufe nke mgbagwoju anya, egwu, na ụgha. A ga-eme ka anyị kpuo ìsì ma ọ bụrụ na anyị anwa ilegide ha anya, chọpụta ha—dị nnọọ ka otu ga-adị ma ọ bụrụ na ọ nwara ilegide ajọ ifufe nke Category 5 anya. A na-egosi gị onyonyo, isi akụkọ, na ozi kwa ụbọchị ka “akụkọ”. Ha abụghị. Nke a bụ ogige egwuregwu nke Setan ugbu a - ejiri nlezianya chepụta agha uche na ụmụ mmadụ nke "nna nke ụgha" na-eduzi iji dozie ụzọ maka Great Reset and Fourth Industrial Revolution: usoro ụwa nke na-achịkwa kpam kpam, digitized na enweghị nsọpụrụ.Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Oge awa Jona
Ihe na March 1, 2022 March 3, 2022 by Mark
AS A na m ekpe ekpere n’ihu Sacrament a gọziri agọzi n’izu ụka a gara aga, enwere m nnukwu iru uju nke Onye-nwe anyị— na-akwa ákwá, ọ dị ka ihe a kpọrọ mmadụ ajụla ịhụnanya Ya. N'ihi na na-esote awa, anyị akwa ọnụ… m, nke ukwuu na-arịọ Ya mgbaghara maka m na anyị mkpokọta ọdịda ịhụ Ya n'anya na nloghachi… na Ya, n'ihi na ụmụ mmadụ ugbu a wepụtawo oké ifufe nke onwe ya.Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Otu esi ebi ndụ n'uche Chineke
Ihe na November 30, 2021 December 2, 2021 by Mark
CHINEKE echekwawo, maka oge anyị, “onyinye nke ibi n'uche Chineke” bụ́ nke bụbu ọkpara Adam ma tụfuo ya site ná mmehie mbụ. Ugbua a na-eweghachi ya dị ka ọkwa ikpeazụ nke ogologo njem nke ndị nke Chineke gaghachi n’obi Nna, ime ka ha bụrụ nwunye na-enweghị ntụpọ ma ọ bụ nhịhịa ma ọ bụ ihe ọ bụla dị otú ahụ, ka o wee dị nsọ, bụrụkwa ndị na-enweghị mmerụ ahụ (Efe 5). :27).Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Ihe omimi nke ala eze Chineke
Ihe na October 27, 2021 November 30, 2021 by Mark
Olee otú Alaeze Chineke dị?
Kedu ihe m ga-atụnyere ya?
Ọ dị ka mkpụrụ mọstad nke mmadụ weere
ma kụọ ya n'ubi.
Mgbe o toro nke ọma, ọ ghọrọ nnukwu ohia
anu-ufe nke elu-igwe nēbi kwa n'alaka-ya nile.
(Ozioma nke taa)
KWA ụbọchị, anyị na-ekpe ekpere okwu ndị a: “Alaeze gị bịa, Ka e mee uche gị n’ụwa dị ka e si eme ya n’eluigwe.” Jizọs agaraghị akụziri anyị ka anyị na-ekpe ekpere otú ahụ ọ gwụla ma anyị tụrụ anya na Alaeze ahụ ga-abịa. N’otu oge ahụ, okwu mbụ nke Onye-nwe anyị n’ije ozi Ya bụ:Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Mbilite n'ọnwụ nke ụka
Ihe na April 4, 2021 April 9, 2021 by Mark
Echiche kachasị ikikere, na nke gosipụtara
na-ekwekọkarị n'Akwụkwọ Nsọ, ọ bụ,
mgbe ọdịda nke emegide Kraịst, Chọọchị Katọlik ga
otu ugboro ọzọ tinye n'elu oge nke
ọganihu na mmeri.
-Ọgwụgwụ nke ụwa dị ugbu a na ihe omimi nke Ndụ Ọdịnihu,
Fr. Charles Arminjon (1824-1885), p. 56–57; Sophia Institute Press
EBE AHỤ bu ihe omimi di omimi n’ime akwukwo Daniel nke n’agha n’iru anyị oge. Ọ kọwakwuru ihe Chineke na-ezube n'oge awa a ka ụwa na-arịdata n'ọchịchịrị ya…Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Ọbịbịa nke Uche Chineke
Ihe na March 4, 2021 March 21, 2021 by Mark
N’afọ ncheta ọnwụ
NKE OGO NKE CHINEKE LUISA PICCARRETA
Nwee i chetụla ihe kpatara Chukwu ji na - ezipụ NWA Meri ka ọ pụta n’uwa? Gịnị kpatara na nnukwu onye nkwusa, St. Paul… ma ọ bụ nnukwu onye nkwusa ozioma, St. John… ma ọ bụ onye mbụ pontiff, St. Peter, "nkume" ahụ? Ihe kpatara ya bu na nne anyi di na nwunye jikoro na uka, dika nne ime mmuo ya na “ihe iriba ama”:Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Na-akwado maka Oge Udo
Ihe na February 16, 2021 February 17, 2021 by Mark
Foto Michał Maksymilian Gwozdek sere
Mmadu aghaghi icho maka udo nke Kraist na ala eze Kraist.
—Pipu PIUS XI, Dị ka Primas, n. 1; 11 Ọnwa Iri na Abụọ 1925, XNUMX
Mary di aso, Nne Chukwu, Nne anyi,
kuziere anyi ikwere, inwe olile anya, ihu anyi n'anya.
Gosi anyị ụzọ nke Alaeze ya!
Kpakpando nke Oké Osimiri, nwuo n’elu anyị ma na-eduzi anyị n’ụzọ anyị!
—POPE BENEDICT XVI, Kwuo Salvi, n. Ogbe 50
KEDU nnoo bu “Oge Udo” nke n’abia mgbe ubochi ndia gasiri? Gịnị mere popu ọkà mmụta okpukpe nke popu ise, gụnyere St John Paul nke Abụọ, kwuru na ọ ga-abụ “ọrụ ebube kasịnụ n'akụkọ ihe mere eme nke ụwa, na-esote Mbilite n'Ọnwụ?”Kadịnal Mario Luigi Ciappi bụ onye ọkpọ ụka popal nke Pius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, na St. John Paul II; site na Catechism ezinụlọ, (Septemba 9th, 1993), p. 35 Gini mere igwe jiri gwa Elizabeth Kindelmann nke Hungary…Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Kadịnal Mario Luigi Ciappi bụ onye ọkpọ ụka popal nke Pius XII, John XXIII, Paul VI, John Paul I, na St. John Paul II; site na Catechism ezinụlọ, (Septemba 9th, 1993), p. 35
Ihe na November 23, 2020 November 23, 2020 by Mark
ACHỌRỌ M iji kwuo ya n'ụzọ doro anya na n'olu dara ụda na nkwuwa okwu dịka m nwere ike: Jizọs na-abịa! Think chere na Pope John Paul nke Abụọ nọ na-abụ abụ mgbe o kwuru, sị:Gaa n'ihu Ọgụgụ →
Dọ Aka ná Ntị nke .hụnanya
Ihe na July 20, 2020 July 21, 2020 by Mark
IS enwere ike imebi obi Chineke? Aga m asị na ọ ga-ekwe omume dupuo Obi ya. Ọ dị mgbe anyị tụlere nke ahụ? Ma ọ bụ ànyị na-eche maka Chineke dịka nnukwu, ịdị ebighi ebi, gabiga ọrụ ndị mmadụ na-adịchaghị mkpa nke na echiche anyị, okwu anyị, na omume anyị bụ ihe a na-akụnye n'aka Ya?Gaa n'ihu Ọgụgụ →